कोरोना संक्रमित युवतीसंगै आएका धरान ६ का युवक सहित ७ जना वी.पी.को आइसोलेसनमा
इटहरीः चैत्र ४ गते कतार एयरवेजबाट नेपाल आएकी कोरोना संक्रमित युवतीसंगै जाहाजमा आएका धरान वडा नम्बर ६ का एक युवालाई वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आइसोलेसनमा राखिएको छ । सुनसरीका चार जना मध्येका अर्का एक जना भोक्राहा नरसिंहका युवकपनि प्रहरी हुदै प्रतिष्ठानको सम्पर्कमा आएका छन् । उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी केही नआएकाले डाक्टरको सल्लाहा बमोजिम होम क्वारेन्टाइनमा रहने गरि फर्काइएको छ । अन्य दुई जनाको खोजी भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यता इटहरी वडा नम्बर १७ ले सोही जहाजमा आउने अन्य दुई जना युवती आफ्नो वडाको भएको बताएको छ ।
वी.पी. प्रतिष्ठानका अनुसार धरानकै अन्य दुई जनालाई मोरगं टाँडीमा रहेको क्वारेन्टाइन पठाइएको छ । ती दुई जना दुवही र भारतबाट आएका हुन् । स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या नभए पनि उनीहरुकै इच्छा अनुसार क्वारेन्टाइन लगिएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य मशाहाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिए । उनीहरु दुवैको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आवश्यक चेकजाँच भएको थियो । स्वाब पनि लिएर दुवैलाई प्रतिष्ठानले क्वारेन्टाइनमा बस्न सिफारिश गरेको थियो । प्रतिष्ठानको सिफारिश पछि उपमहानगरपालिले पत्र लेखेपछि मात्र प्रहरीको स्कर्टिङमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइने गरिन्छ ।
चिनिया नागरिक र मोरङको बेलबारी १० का उनको साथी आइसोलेसनमा छन् । यस्तै, बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ का श्रीमान् र श्रीमति पनि आइसोलेसनमा छन् । मोरङको कानेपोखरी ५ का एक दम्पत्ति पनि आइसोलेसनमा नै रहेका छन् भने फ्रान्सबाट कोरोना संक्रमित युवतीसँगै एउटै जहाजमा आएका धरान ६ का व्यक्ति पनि आइसोलेसनमा नै राखिएको छ । उनीहरुलाई उपचार आवश्यक भएकोले आइसोलेसनमा राखिएको प्रतिष्ठानका सह प्रवक्ता डाक्टर अशोक ऐरले बताए ।